Checker Nchekwa ebe
Esi eji ndọtị
Wụnye ndọtị Chrome
➥ Gaa na URL ⤓ Download
URL a dị mma!
Lelee URL ọzọ
Ngwaọrụ nchekwa a wuru iji chọpụta ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị ize ndụ na weebụ ma gwa ndị ọrụ nke nsogbu. Anyị na-atụ anya ịkwalite inwe ọganihu na ebe nrụọrụ weebụ dị nchedo ma dị nchebe karị.
Ebe nrụọrụ weebụ ndị a nwere koodu nke na-etinye software maliri na kọmputa ndị ọbịa, ma mgbe onye ọrụ chere na ha na-ebudata software ziri ezi ma ọ bụ na-enweghị ihe ọmụma nke onye ọrụ. Ndị omere ike nwere ike iji software a iji weghachite ma zigara ndị ọrụ nzuzo ma ọ bụ nke dị nro. Nchọpụta Nchọgharị Nchọpụta anyị na-enyocha ma nyochaa weebụ iji chọpụta weebụsaịtị ndị nwere ike imebi.
Ebe nrụọrụ weebụ ndị a na-eme ka hà bụ ndị ziri ezi ka ha wee nwee ike ịghọgbu ndị ọrụ iji dee aha ha na okwuntughe ma ọ bụ ịkekọrịta ozi nzuzo ndị ọzọ. Ulo Weebụ nke na-abughi ụlọ akụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa na ntanetị bụ ihe atụ nke saịtị phishing.
Otu anyi si amata malware
Usoro malware ahụ na-ekpuchi ọtụtụ usoro software dị iche iche iji chebe nsogbu. Ebe ndị nwere ọrịa na-etinye malware na ngwaọrụ onye ọrụ iji zụọ ozi nzuzo ma ọ bụ na-achịkwa ígwè ọrụ ma wakpo kọmputa ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-ebudata malware a n'ihi na ha chere na ha na-etinye ihe ngwanrọ dị mma ma ha amaghị ụdị obi ọjọọ. N'oge ndị ọzọ, a na-ebudata malware n'enweghị ihe ọmụma ha. Ụdị nje ndị ọzọ na-agụnye ransomware, spyware, nje, ikpuru, na ịnyịnya ịnyịnya.
Malware nwere ike zoo n'ọtụtụ ebe, ọ ga-esiri ndị ọkachamara ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ha bụ oria. Iji chọpụta ebe ndị nwere nsogbu, anyị na-enyocha weebụ ma jiri igwe mebere rụọ ọrụ iji nyochaa saịtị ebe anyị chọtara akara ngosi nke na-egosi na e mebila saịtị.
Ndị a bụ ebe nrụọrụ weebụ na ndị omempụ setịpụrụ iji jiri obi ha kwado ma kesaa ngwanrọ ọjọọ. Ebe ndị a na-eji ihe nchọgharị ma ọ bụ nwee ngwanrọ na-emerụ ahụ bụ ndị na-egosiputa àgwà ọjọọ. Nkà na ụzụ anyị nwere ike ịchọpụta àgwà ndị a iji kpochapụ saịtị ndị a dị ka saịtị mmegide.
Ebe a kwadoro
Ndị a bụ ebe nrụọrụ weebụ ziri ezi nke a na-etinye na ha gụnyere ịgụnye ọdịnaya si, ma ọ bụ iji nye ndị ọrụ ọrụ, saịtị ndị nwere ike iji ihe nchọgharị ha. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịmepụta ibe nke saịtị iji tinye koodu nke na-ebute onye ọrụ gaa ebe a na-awakpo.